सर्वसाधारणलाई पासपोर्टको बाहिरी रंग परिवर्तन हुने | mulkhabar.com
सर्वसाधारणलाई पासपोर्टको बाहिरी रंग परिवर्तन हुने
November 18, 2018 | 9:46 am 128 Hits
काठमाडौं, २ मंसीर/
सर्वसाधारणलाई जारी गरिने राहदानीको बाहिरी रंग परिवर्तन हुने भएको छ। ई–पासपोर्टमा जाने क्रममा पासपोर्टको कलर पनि फेरिन लागेको हो। सरकारले दुई वर्षभित्र ई–पासपोर्टमा गइसक्ने नीति लिएको छ।
सुरक्षित बनाउन राहदानीमा चिप्स राख्न र रंग परिवर्तन गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्रोतले बतायो। यससम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। ७० लाख थान राहदानीमध्ये १३ लाख बाँकी छन्। ती पनि सकिन लाग्दा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
ई–पासपोर्ट तयार गर्दा रंग परिवर्तन र पृष्ठ थपिने राहदानी विभागका अधिकारीले बताए। दक्षिण एसियाकै महँगो भनिएको नेपाली पासपोर्टको भित्र भिसा र विमानस्थल छाप उपयोग हुने जम्मा २२ पाना मात्र छन्। पृष्ठ बढाउने र हरियो रंग परिवर्तन लामो समयदेखि बहसमा थियो। हरियो पासपोर्ट बोक्दा कैयन राष्ट्रले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत फरक परेको छलफलमा उठेको भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
सर्वसाधारणले बोक्ने पासपोर्ट कफी, कलेजी र मेहँदी रंगमध्ये एउटा बनाउने छलफल भए पनि विभागको प्रस्तावमा अक्वा ब्ल्यू (हल्का निलो) प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अहिले पनि बहस भइरहेको छ। अधिकांशको जोड कफी रंगमा छ। विश्वका अधिकांश देशका सर्वसाधारणले बोक्ने पासपोर्ट कफी रंगकै रहेको छ। कतिपय खाडी देशकै झण्डा र राष्ट्रको रंग समेत हरियो रहेकाले पनि रंग फेर्न छलफल भइरहेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
‘रंगबारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन आईकाओको बाध्यकारी नियम नहुँदा समस्या आएको हो’, राहदानी विभागका एक अधिकारीले बताए। हुन त सरकारले यसअघि नै ६ प्रकारका पासपोर्ट जारी गर्ने जनाइसकेको छ। सरकारले साधारण (हरियो), कूटनीतिक (रातो), विशेष (नीलो) र यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी ४ प्रकारका राहदानी जारी गरिरहेको छ।
रातोबाहेक अन्य सबैको रंग फेरिने विभागले जनाएको छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा ५ खालका राहदानी र ट्राभललग जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। थपिने दुई राहदानीमा ‘सर्भिस पासपोर्ट’ र ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ छन । विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारी या विशेष पासपोर्टधारीले विदेशमा लैजाने सहयोगीलाई सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था पनि छ। जहाजमा काम गर्नेलाई सिम्यान्स पासपोर्ट–लग उपलब्ध गराउने विषय पनि परेको छ। थपिने पासपोर्टको रंगबारे छलफल हुनेछ। यसको पनि रंग टुंगो लागेको छैन।
निजि स्कुलको नाम नेपालीमा लेख्न कामनपाकाे निर्देशन, नगरे कार्वाही !
काठमाडौं , २० फागुन – काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयले अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने…
जमिन फिर्ताको माग गर्दै ग्रेटर नेपालले बुझायो वेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीलाई ३ बुँदे ज्ञापन पत्र (पूर्ण पाठ)
काठमाडौं , फागुन – ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपाल भ्रमणमा अाएका बेलायती रक्षा राज्य मन्त्रीलाई ३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ…
बेल्जियममा नेपाली च्यारिटी, एक्सपाे र हाेलिडे फेयर गर्ने निर्णय, कार्यदलहरू निर्माण
कांग्रेसमा मिल्यो विवाद, १३ पदाधिकारी, ७ सहमहामन्त्री रहने
विद्यार्थी सुधार्न दण्ड की पुरस्कार ? लाै पढाैं
लाग्याे ईन्जिनियरलाई चुनाव, यस्ताे छ प्रगतिशील प्यानलकाे प्रतिवद्ता
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय : प्रतिभा पुरस्कारदेखि भिआइपी निवास र राजकीय पाहुना गृह बनाउनेसम्म
जनतालाई सरकार भएको आभास दिलाउँछौं : मन्त्री जम्मकट्टेल
सुरक्षा निकायको पोशाक खरिदमा अनियमितता, छानबिन सुरु
मन्त्री बिनाले भनिन् -‘महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएर मात्रै समृद्धि सम्भव’
राजनीतिview all	देउवाको दावी– नागरिकको मर्मअनुसार काम गर्ने पार्टी काँग्रेस मात्रै
नेकपा ३ नं प्रदेशले दियाे टाेर्नाडाे पीडितलाई १४ लाख ७० हजार र जिन्सी सहयाेग
सत्ता विमुख कम्युनिस्ट एक हाेअाैं – वैद्य
नेकपा ३ नं प्रदेशले बनायो ४ महिने कार्ययोजना (कार्ययोजनासहित)
कसले हाल्याे देउवालाई हदैसम्म कार्वाहीको माग गर्दै उजुरी ?
विप्लव नेकपा नेता शुदर्शनलाई रिहा गर्न माग गर्दै छोरीले हालिन् रिट
अन्तरवार्ता / बिचारview all चकनाचुर न्यायालय
चैत २४ र २६ : इतिहास र वर्तमान
महिलाको अवस्था : हिजाे र अाज
चिन : खुलापन र विकासका ४ दशक